5 Fanontaniana Tokony Anontanio amin'ny The First Date
amin'ny Samantha Greaves
Voalohany daty ireo dia afaka ho toy ny tafa sy dinika, fa noho ny fitiavana ny fiainana. Dia hahatonga anao na sahiran-tsaina sy faly. Ary indraindray afaka mahita ny tenanao toy izany ny daty lanin'ny ny eritreritry ny aminareo fa tamin'ny faran'ny ny daty, ianao mahatsapa ianao na inona na inona momba azy ireo nianatra.
Aza sosotra, misy ny vahaolana noho izany.
Ireo 5 fanontaniana dia azo antoka fa miala avy hatrany ny daty voalohany amim-pahatokiana ianao mahalala raha ho liana amin'ny hahita azy ireo indray.
Inona no zavatra tianao indrindra hanao?
Izany dia iray tsotra satria be dia be isika tia miresaka momba ny tenantsika. Hanome anao mba hiverina ny saina eo ny daty sy ny tena mianatra izay mitondra hafaliana ho azy ireo. Matetika rehefa mangataka izany fanontaniana, ny daty hita ihany koa ny tsy tiany. FANTARO IZAY mitondra amin'ny tsara sy ny negatives - miafina ao ny valiny mety ho hevitra lehibe iray mifototra amin'ny daty faharoa ny tombontsoany.
Mandra-pahoviana ianao no tokan-tena?
Izany dia toa toy ny fanontaniana tsy mahazo aina fa zava-dehibe. Ny fahafantarana ny daty raha misafidy ny ho tokan-tena azy ireo amin'ny maha-mpitovo oharina fa mijery mavitrika, ho aminao raha mampiasa vola ianao amim-pahendrena ny fotoana ho amin'izany daty voalohany. Te-ho azo antoka fa ny fifandraisanareo tanjona mitovy. Ny zavatra farany izay tianao no ho ny roa aminareo ny zava-maniry isan-karazany, ary mba hahita izany daty maro taty aoriana.
Ve ianao na iray tam-po?
Mametraka io fanontaniana io, satria indray lehibe, ianao mamadika ny mifantoka amin'ny ny daty. Tapping koa ianareo ho ny heviny momba ny fianakaviana. Mety mihitsy aza izy ireo tamin'ny farany hita raha te hanorina fianakaviana aho ny manokana. Io fanontaniana io dia hanome anao be dia be mba hiresaka momba satria misy foana tantara lehibe manodidina ny lohahevitra ny mpiray tam-po.
Ahoana ny famantarana?
Izany dia oldie fa goodie. Tena hevitra tsara raha te-hanontany io fanontaniana io teo am-piandohan'ny ny daty. Olona tia ny Zodiaka famantarana sy na dia tsy mino ny fanandroana, dia mbola misokatra tanteraka ny nandre ny zavatra fantatrao momba ny famantarana. Zodiaka famantarana dia hafa fanitarana ny tenantsika sy ho olona misy na inona na inona isika, tia kokoa noho ny mianatra zava-baovao momba ny tenantsika.
Inona no hitady amin'ny mpiara-miasa?
Izany no manan-danja daty voalohany fanontaniana. Izany zavatra be dia be tsy daters fangatahana satria tsy te-hampitahorana ny hafa izy. Fa fametrahana fanontaniana izany dia hanome Fahatakarana ny Hevitry ny karazana olona hisambotra ny daty ny maso sy izay niisa izy raha oharina. Miezaka ny tsy ho mitsara loatra ny valiny, raha tsy mitovy hevitra amin'izy ireo. Izany dia mifototra amin'ny tombontsoa manokana ireo ary tokony ho ekena ho toy izany. Rehefa afaka izany, dia nametraka fanontaniana, dia ho fantatrao fa azo antoka raha daty voalohany manana ny mety ho hamony ho zavatra be lavitra.
6 Karazam-vehivavy lahy mitady
Inona no vehivavy mitady lehilahy? Io no fanontaniana iray amin'ny maro valin-. Misy ry zalahy mitady firaisana ara-nofo ...